I-Jimmy Watties iCoy Cottage enemibono ephefumlayo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAmy
I-Coy Cottage ene-Breathtaking Mountain Views ibekwe kumbindi weentaba ze-Knockmealdown. Vuka uye kwiintsimbi ze-Mt. Mellery Abbey ezivakala ngaphaya kwentlambo yomlambo iMonavugga. Ramble endleleni ngasemva kwendlu ukuya kwibhulorho engasemva ekhokelela eSt. Declan's way nakwindawo yeMt. Mellery Abbey. SikwiVee Drive enendawo ebukekayo, imizuzu engama-20 ukuya kwidolophu eselunxwemeni yaseDungarvan kunye neGreenway yayo entle. Imizuzu eli-10 ukuya kwidolophu yaseLismore.
Nokuba ufuna isiseko sokukhenketha lo mmandla unembonakalo entle okanye ixesha lokuphumla, uJimmy Watties Cottage uphawula zonke iibhokisi. Phuma ngomnyango ongasemva uye kwigadi yakho yabucala kunye nendawo yepatio enemibono yeAbbey kunye neKnockmealdown Mts. Kukho indawo yokupaka iimoto ezi-2 kunye nokugcinwa kweebhayisekile kunye namaphenyane. Le ndlu inefenitshala entle inegumbi eli-1 elinesibini kunye negumbi elinamawele. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Upholile kumlilo welog yakho ekupheleni kosuku. Iilogi zinikezelwe. Yonwabela iWi-Fi kunye ne-smart TV.
5.0 ·Izimvo eziyi-70
5.0 · Izimvo eziyi-70
Sineendlela ezininzi zokuhamba kwindawo. Ibekwe kwindlela yaseSt. Declan kunye neVee drive. Abahambi kunye nabahamba ngeenduli yiparadesi. ICappoquin ikuMlambo iBlackwater eyaziwa ngokuloba iitrout kunye nesalmon. Ukuqala kwendlela eluhlaza kunye ne-blue flag beach yimizuzu engama-20 ukusuka kwi-cottage. Rhoqo ngeeCawe kukho imarike yamafama kumnyango weLismore Castle.
Umbuki zindwendwe ngu- Amy
Ndizokubulisa ekuqaleni kokuhlala kwakho kwaye ukuba ufuna uncedo ngexesha lokuhlala kwakho ndiyafumaneka ukukunceda.